#ဘုရားတွေကိုဒီလိုဖူးခဲ့ပါတယ် – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
#ညီမလေးကျ တရား ဘယ်ချိန် ထိုင်ထိုင် ထိုင်လိုက်တာနဲ့ အလင်းနိမိတ် တန်းလာတာလားရှင့် #နတ်ပြည်ကဘုရားတွေကော မြန်မာပြည်ထဲက ဘုရားတွေကော ခုလည်းဖူးချင် တဲ့အချိန်ဖူး လို့ ရနေတာလားရှင့် သိချင်မိလို့ပါရှင့် #ညီမလေးပြောသလိုပဲ တရားတာမှတ်နေတာ လိုချင်လော ဘ ကိလေသာ ပူလောင် နေရ တယ်…. #အလင်း ရရမရရ ကမ္ပဌန်း တခုခု ကိုပဲ ဆက်မှတ် ဆက် ပွား နေရမလားရှင့် ….#အမကမေတ္တာဘာဝနာပဲပွားချင်နေမိတယ် တရားထိုင်တိုင်း မေတ္တာဘာဝ နာကိုပဲ ပွားလို့ ရလာ #အာ့လိုဆိုလည်း အလင်း နိမိတ်ရရှိ လာနိုင်လားရှင့်….#ကိုယ်ခန္ဓာတစ် ခုနဲ့ ဘုရားဖူးနည်းစိ တ် ညွှ တ် န ည်း လေး ရှ င်း ပြ ပါ #ရိပ်သာမှာဖူးခဲ့ရတဲ့ ဘုရားတွေအကြောင်း လေးအားရင် ပြောပြပေးပါ။ #အမျှလာယူကြတဲ့ သတ္တဝါတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လုပ်ပါသလဲ? #ဘုရားတွေဖူးခဲ့တုန်းက တွေ့ မြင်ခဲ့ ရတဲ့ အတွေ့ အကြုံ လေးတွေကို အားရင် ပြောပေးပါ။ #Nipponရောဘုရားပွင့်တဲ့နေရာကိုဖူးတော့မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားပုံဖူးခဲ့ရလား?မမဖူးခဲ့ ရတာနဲ့ရော တူလား?14.4.2020 နေ့ က post တင် ပေးထား သော မူရင်း post လေးအား ဖြည့်စွပ်ဖြေပေးလိုက်ရပါသည်..။
အထက်ပါမေးခွန်းလေးတွေကို ရထားတာလည်း ကြာလှပေါ့….သို့သော် စာရေးသူ အချိန်မရတာ က တကြောင်း ပြီးတော့ ဒီကိစ္စ တွေက တော်တော် များများ ယောဂီ ကိုယ်တွေ့ စာစုများနဲ့ ဆရာ တော် ကြီး များ မူရင်း ကျမ်းစာ တွေထဲ မှာ အသေး စိတ်တွေ ရေးထား ပြီးသား များ ရှိ နေ သော ကြောင့်တကြောင်း….စသော စသော အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မရေးဖြစ်ခဲ့ တာပါ။ခုတော့ဖြင့် မေးသူများ ကလည်း ဒါပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ မေးနေ တာကြောင့်… ကဲ…. stay home ကာလလေး မှာ ရေးပေး ပါမယ် လေ ဆိုပြီး…ယခု တော့ဖြင့် အချိန် ယူ၍ ရေးပေး ရပါ တော့သည်။ မေးခွန်းနံ ပါတ်တွေအလိုက်မဖြေတော့ပဲ စာရေးသူ ပြောပြချင်တာလေးတွေကို ချရေးပေးသွားပါ့မယ်နော် …ပထမဆုံး ဦးစွာတောင်းပန်စကား ပြောကြားပါရစေရှင့် စာဖတ်ပြီးလို့ မေးစရာများရှိလာလို့ sms ပို့ထားခဲ့လျှင် စာရေးသူ အားခဲ့လျှင် ပြန်ဖြေ ပေးထါးပါ မယ်လို့… ဒါလေးအရင်ကြိုပြော ရသေး… မဟုတ်ရင် မာန ကြီးတယ် ချေဒယ် ထင်မှာ လဲစိုးသေး ……….. စာရေးသူ အသံနှင့် သာ ပြောလိုက် ချင်တာပါ..ဒါမှ အားရပါးရ ပြောလို့ နားထောင် လို့ရမှာ….မဟုတ်ရင်…..စာရေးရ တာ အတော် ကြာတာ ပဲ… #စပါပြီ…..အရင် ဆုံး စာရေးသူ ဘာကြောင့် မကြောက် တော့တာလဲ ဘာလို့ မမြင်အပ်တာ ကြောက်လန့်စရာတွေမတွေ့ခဲ့ရတာလဲ ဒါလေးပြောပြမယ်နော်…။
ရိပ်သာ ရောက်စက အဆင်မပြေခြင်း တွေနဲ့ရင်ဆိုင် ခဲ့ရပုံတွေကိုတော့ စာရေးသူ အခန်းဆက် များမှာ အသေးစိတ်ကို ရေးပေး ခဲ့ပြီးပြီမို့ ခုထပ်မရေး ပေးတော့ပါ.. ခုရေးပေးမှာက စာရေးသူ အဲ့ဒါကို ဘယ်လို ကျော်ဖြတ် ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း လေးပါ… #ရိပ်သာမှာ စခန်းဝင်ယောဂီ အန်တီတယောက် နဲ့ ယောဂီ ထိမ်း #volunteer အန်တီ ကျင်ရွှေ တို့က ပြောပြ ပါ တယ်……. သမီးရေ #အဆောင်စောင့်နတ်တွေကိုမေတ္တာပို့ တိုင်တည် ပါတဲ့ သူတို့ကို စောင့်ရှောက် ခိုင်းနော် တဲ့… ဒလိုတွေ မှာကြားပြီး သည့်နောက် မှာ.စာရေးသူ နေတဲ့ အဆောင် ရဲ့ အဆောင်စောင့် နတ် မင်းကို သူငယ်ချင်းဖွဲ့ပါတယ်… ပထမ တရက်ကတော့ ကြောက်ပါ သေးတယ်… နောက်ရက် တွေတော့ မကြောက်တော့ပါဘူး… ဘယ်လို မိတ်ဆွေဖွဲ့သလဲဆိုတော့… ကဲ… ဒီအဆောင်ကို စောင့်တဲ့ နတ်မင်း ကြီးခင်ဗျားးးးး… အကျွန်ုပ် သည် ယခု ၄၅ရက် ကာလ အတွင်းမှာ.. . တရား အားထုတ် မည်ဖြစ် ပါသော ကြောင့် သင်တို့က တကယ်ကို နတ်ကောင်း နတ်မြတ် တွေဖြစ် ခဲ့ပါ လျှင်… အကျွနုပ် အား ကြောက် လန့်စရာ အကြား အမြင် အသံ စသော အရာများကို သေး သေး မှစ၍ အရိပ် အယောင်တောင် မပြ နိုင်ကြ အောင် သင်တို့က စောင့်ရှောက် ပေးပါ….. အကျွနုပ် ပြုလုပ်ပြီးသော ကုသိုလ် အဖို့ တို့ကို သင်တို့အား ကျေကျေ နပ်နပ် ရက်ရက် ရောရော ကြီး ထပ်တူရအောင် အကျွန်ုပ်မှ အကျွနုပ်ပြုလုပ်ထားသော နေ့စဥ် ကုသိုလ်များကို လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ အမျှ များကို ပေးဝေပေးပါမယ်…။
ဒါကြောင့် အကျွနုပ် ကို အထက်ပါပြောထားသော အကြောင်းအရာ များ စိုးစဥ်းမျှ မကြား၊မနံ မမြင် ရအောင် စောင့်ရှောက် တော်မူပေး ကြပါ…. အကျွနုပ် ပြုလုပ် အားထုတ် နေသော တရား များသည် မဟာကုသိုလ်ကြီးများဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် သင်တို့မှ သာဓုခေါ်၍ သင်တို့ ၏ ကိုယ်ရောင် ကိုဝှာများယခုထက် မက တောက်ပ၍ ယခုထက်လည်း တန်ခိုးကြီးကြပါစေ… .ယခုလို စိတ်ထဲမှ ပြော ဆိုပြီး အဆောင် စောင့်နတ် မင်းကြီး ကို သတိ ရတိုင်း ပြောနေ ခဲ့ပါ တယ်….. စာရေး သူမှာ သူနှင့် သူငယ်ချင်း သဖွယ် စိတ်ချင်း ဆက်သွယ် စကား ပြော ၍ အကူ အညီ များတောင်း ခံခဲ့ပါသည်။ တခါတလေ သူ့ကို မြင်ချင်စိတ်ဖြစ်လာခဲ့လျှင်…ဟာ… မဖြစ်ဖူး … ငါ မြင် လိုက်လို့…သူကပါ…ကြောက်စရာပုံ ဖြစ်နေရင် ငါကြောက် နေမယ်…မဖြစ်ဘူး… မဖြစ် ဘူး… သူ့ကိုလည်း…မမြင်ပါ ရစေနဲ့ ဆိုပြီး… အသင် နတ်မင်းကြီး ကိုလည်း အကျွနုပ် ကြောက် လန့်စေ နိုင်သော ပုံသဏ္ဍန် ဖြစ်နေခဲ့ ပါလျှင်….အကျွန်ုပ်ကို မပြ ပါနှင့်….ဆိုပြီး… သူ့ကိုပါ မပြ အောင် အားလုံး ဘာမှ မမြင် မကြားရ စေအောင်…အပြီး…တိုင်တည်ထား လိုက်ပါတယ်…. စာရေးသူ အဆောင်စောင့်နတ်မင်းတင်မကပါဘူး….. အခြား အဆောင်အသီးသီးကို စောင့်နေကြ တဲ့ နတ်တွေရော… ဓမ္မာရုံစောင့် နတ်မင်းကြီးရော… ရိပ်သာ စောင့်နတ် မင်းကြီးရော… စာရေးသူ ရိပ်သာ မဝင်ခင် ၂လ ထဲက ကြိုတင် မေတ္တာပို့ထားပါတယ်။
မေတ္တာ ပို့ထားတာမှ တရက်တနာရီ ထဲ မဟုတ်ပါဘူး. နေ့စဥ် သတိရတိုင်း ပို့ပေးနေခဲ့တာပါ…. ဘာကြောင့် ယခုလို လုပ်ရ သနည်း ဆိုလျှင်….ဘဘ ဦးဌေးလှိုင် အသံ file များ နာကြား ရစဥ် အခါ တည်းက… မေတ္တာ များများ ပို့ရမယ်… မေတ္တာ ပို့တာ နာရီ ဝက် ရှိလို့ ဝါယူ ဝါမှတ် မရမှာ မပူနဲ့ တူတူသွား ကျတယ်ဗျ… ဆိုသော ဘဘ စကားတွေ နားထောင်ပြီး မေတ္တာ ကို လေ့ကျင့်ပို့ ဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ်… မေတ္တာဟာ ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်တဲ့ လက်နက်လည်း ဆိုတာတွေကို နာကြားရပြီးသည့် နောက်မှာ စာရေးသူ မေတ္တာ ပို့တာကို… အကျဥ်းရော အကျယ်ရော ပို့ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်…. ရိပ်သာ ရောက်တော့ သရဲ ကြောက်စိတ်နဲ့ နတ်တွေကို သူငယ်ချင်း လုပ်ထား လိုက် ပါရော .. အမှန် ပြောရရင် ကြောက်လို့ပါ…. ဒလိုနဲ့ နတ် တွေနဲ့ သူငယ်ချင်း လို ဖြစ်သွား တော့ တခုခု ဆို စိတ်ထဲ ကနေ သူတို့ ကို တိုင်တည် ပြောလိုက် တာပေါ့ လေ…. နောက် တခုက ဘုန်းဘုန်းကြီး ပြောထားတာကိုလည်းယုံကြည်ခဲ့ပါတယ် ။
အာ့ဒါကြောင့် မို့ စာရေးသူထင်မိပါသည်… စာရေးသူ ဘာသရဲမှ ဘာပြိတ္တာမှ မမြင် တွေ့ခဲ့ရ ပါ… .ဘယ်သူမှ ဘယ်ဆွေမျိုးမှလည်း အမျှလာတောင်းတာ မခံခဲ့ရပါ။.. သူတို့တောင်းစရာမ လိုရလောက်အောင်ကို စာရေးသူကလည်း အမျှကို သတိရတိုင်းပေး မေတ္တာ ကို သေသေ ချာချာ ပို့ပေးနေခဲ့ပါတယ်…. အဲ့ဒီအကျင့်ကြီးက ခုထိပါပဲ….စိတ်ထဲမှာ အရမ်း လုံခြုံနေ တယ်လို့ ခံစား ခဲ့ရ ပါတယ်…. ဒီ အကြောင်းတွေ ကို မိတ်ဆွေ ကို ပြောပြ ဖြစ်တော့…. ဟာ… ဖြစ်နိုင် တယ် Nippon ရေတဲ့….. သူ ကြားဖူးတာ တခု ရှိတယ် တဲ့…. ယနေ့ လက်ရှိ နာမည် ကြီး ဆရာတော် တပါးလည်း… ဆရာတော်လည်း…ကြောက်တက်လို့…ခုလို Nippon လုပ်သလိုမျိုး လုပ်တယ် တဲ့…. အို….. ဟုတ်လား…. အင်း… ဒါဆို…​ အားရှိသွားပြန်ပြီလို့… ဒလိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်…. ဒါကြောင့် စာရေးသူ ဖာသာ စိတ်ထဲကနေ မမြင်ရတဲ့ မိမိရဲ့ ကိုယ်စောင့် နတ် အိမ်စောင့်နတ် တွေကို သူငယ်ချင်း လို ပေါင်းပါတယ်..
လူ အနေ နဲ့ စာရေးသူ ဘေးမှာ ဘယ်သူ မှ မရှိ နေပေ မယ့်….သူတို့ ကတော့ အမြဲ ရှိနေ သလို စာရေးသူ သူတို့နဲ့ စကားပြောပြော ဖြစ်ပါတယ် လို့… ဒါကြောင့် ပင်လျှင် စာရေးသူ ရိပ်သာ မှာ ဘာဆို ဘာမှ ကြောက်လန့် စရာ အနေ နဲ့ မမြင် မကြား ခဲ့သည် လို့ ထင်မြင် ယူဆ မိပါ သည်။ ဤ သည်ကား စာရေးသူ ၏ ထင်မြင် ချက်သာတည်း…. ထို့ကြောင့် မေးခွန်းတခု ကို ယခု လို ဖြေပေးလိုက် ပါတယ် နော်… စာရေးသူ အလင်းနိမိတ် ရပြီး ဘုရားဖူးခန်း စတင်ချိန်မှာ စစ ချင်း ဖူးခိုင်း တဲ့ ရိပ်သာတွင်း က ငမိုးရိပ် စေတီကို ဌာပနာ တွေကိုပါ ဘုန်းဘုန်းကြီး က ဖူးခိုင်း ပါ တယ်… စာရေးသူ ဖူးခဲ့ရပါတယ် စာရှည်သွားပြန်ပြီ…. အပိုင်းခွဲရေး ပေးပါ့မယ် နော်…ခဏ နေ ပြန်လာ ခဲ့ပါ့မယ်… Stay home ကာလ လေးမှာ စာရေးသူ ၏ ကိုယ် တွေ့ လေး တွေဖတ်ရင်း စိတ်ကူးများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင် ကြပါစေ. လိုစ့်…
#မမတယောက်က စာရေးသူ ၏post များကို ဖတ်ပြီးအလုပ်က ခွင့်ရတဲ့အချိန်လေး မြန်မာပြည် ပြန်လာပြီး ရိပ်သာ ၁၀ ရက် ဝင်ခဲ့ ပါတယ်… မမက ရိပ်သာက ပြန်ထွက် လာတော့….Nippon ရေ မမ #မေးစရာတွေအများကြီးရှိနေတယ် မသိတာလေးတွေဆိုပြီး….အစချီသော စကားဖြင့်… စာရေးသူ ကို #မေးခွန်းများမေးလေတော့သည်။ မမက အချိန်၁၀ရက်ထဲမို့ ဘုရားဖူးကို နတ် ပြည် တို့ ဘာတို့ မဖူး ခဲ့ရဖူး ညလေး ရယ်တဲ့… မမဖူးခဲ့ရတဲ့ အထဲမှာလေ ဗုဒ္ဓဂါယာ ကိုဖူးတော့ မြတ်စွာ ဘုရားကို ညောင်စောင်းမှာ လျောင်းတော် မူပုံနဲ့ဖူးခဲ့ရတယ် ညလေးရော ဘယ်လို ဖူးခဲ့ရ လဲတဲ့…. အော်…. Nippon ဖူးခဲ့ရ တာကလည်း မြတ်စွာဘုရားကိုလျောင်းလျှက် အနေအထား သက်န်းနီ ညိုရောင် အသားရောင် ဝင်းဝါ ကြည် လင်ပြီး အင်ကြင်း ပင်တွေ ကြားထဲ မှာ ဘေးက ပရိတ်သတ် တွေက လက်အုပ် ချီပြီး ဖူးနေကြတဲ့ပုံရယ်… မယ်တော် မာယာပုံရယ်… နောက်ပြီး မြတ်စွာဘုရား တရားဟောနေတဲ့ အပေါ်ပိုင်းမျက်နှာတော်ရယ်… အဲ့လိုတွေ ဖူးခဲ့ရပါတယ် မမ… အေးနော်….. မမလည်း အပေါ် ပိုင်း ကိုပဲ သဲသဲ​ ကွဲကွဲ မြင် ရတယ်…. အော်…. ဟုတ်…. အဲ့ဒါ သမာဓိ ကြောင့် ပါ မမ…. စသော မမ နှင့် အပြန် အလှန် ပြောပြီး သည့် နောက်မှာ တော့…. စာရေး သူ ရိပ်သာ မှာ တုန်း က ဖူးတွေ့ ခဲ့ရ တဲ့ ထူးခြား ဘုရား ဖူးခန်း တွေ ကို မေး နေကြ သော မိတ်ဆွေများအား ရည်ရွယ်၍ ရေးပေးပါ့မယ်နော်….။
စာရေးသူက ဘာကြောင့် ဘုရားဖူးခန်းတွေကို အကျယ်ချဲ့ပြီး အသေးစိတ် မရေးပြတာလည်း ဆိုရင်ဖြင့်…မသိတဲ့သူ မကျင့်ဖူး တဲ့သူ သဒ္ဓါ မရှိ တဲ့သူ တချို့ ဖတ်မိခဲ့ ရင်သူမသိလို့ ပြစ်မှား မိမှာ အရမ်းဆိုးလို့ပါ.. ဒါမို့ အခန်းဆက်တွေမှာ ဖူးခဲ့ရတဲ့ Detail ကို မရေးခဲ့ရတာပါ..ယခုက တောင်း ဆိုသူ တွေက မယုံ လို့ မဟုတ်ပါ ဘူး.. ကြည်နူး ချင်လို့ ပါ..နဲနဲ တော့ ရေးပေး ပါ.. နော်… ဆိုပြီး.. တောင်းဆို လာတာနဲ့…ခု လိုလေး ရေးပေးလိုက် တာပါ..ရေးပေး ရကျိုး နပ်ခဲ့ ပါပြီ..ယခု ဆိုလျှင် တောင်းဆို လာသူကိုယ် ၌က online တရား စခန်းကို အချိ န်ပြည့် ဦးဆောင်ပြီး admin အဖြစ် ဖြင့်..တာဝန်ယူ ကာ…ယောဂီ တို့ကို အားဖြည့် ကူညီဝန် ဆောင်လို့ ပေးနေပါပြီ ကော…ဒီစာလေး ဟာ….Admin ကိုရှိန်း… အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန် မှုကြောင့် ရေး ဖြစ် ခဲ့ပါ တယ်…..စာက တော့ 16.4.2020 က post ထား ပြီးသား post အဟောင်းလေး..ဒုတိယ ပိုင်း ကို ပြန်လည် မျှဝေ ပေး တါ ပါရှင့်…
ဆရာတော် ဘုရားကြီးမှ ဗိုလ်တထောင် ဘုရား နဲ့ ကျောက်တန်း ရေလည်ဘုရား ဖူးခိုင်းတဲ့ နေ့မှာ #အထူး မှာကြားလိုက် တာက…… အဲ့ဘုရား ၂ဆူရဲ့ ဘယ်လို #ဆက်စပ်မှု ရှိသလဲ ဆိုတာ ကိုပါ ကြည့် ခိုင်းခဲ့ပါတယ်… ခိုင်းတဲ့အတိုင်း စာရေးသူ လည်းကြည့်ခဲ့ ပါသည်။… ပထမဆုံး #ဗိုလ် တထောင် ဘုရားရဲ့ အတွင်း နက်နက်ထဲထိ စိတ်လွှတ်ကြည့်ခဲ့ပါသည်…. #ဓာတ်တော်မွေတော် တွေလို့ ထင်ရ သည့် အရာများ ရွှေကလပ်ပေါ်မှာ အရောင် တွေ ဖိတ်ဖိတ် တောက်နေတာ ကို ဖူး တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ဤနေရာတွင်….ဘုရားတွေကို #ဘယ်လိုဖူးတာလဲ စိတ်ဘယ်လိုညွတ်တာလဲ စသောစသော မေးခွန်းများ မေးထားသူ များအတွက်…. စာရေးသူ ၏ #ဘုရားဖူး နည်းလေးကို ပြောပြ ပါ့မယ်နော်…. ပထမဆုံး ဝါယူ ဝါမှတ် ၂၀ မှ ၅၀တွင်း မှတ်လိုက် လို့ #အလင်းတွေလျံ ထွက်လာပြီဆိုရင်…. အဲ့အလင်းကို ခဏလေး စိတ်စိုက်လိုက်ပါတယ်… အလင်းကို အနေတော် #အကြီးအသေးစိတ် နဲ့ ချိန်လိုက်ပါတယ်… ပြီးတာနဲ့ #မိမိဖူးမယ့် ဘုရားဆီကိုစိတ် ကနေအာရုံ ကိုညွတ် လိုက်ပါတယ်…. #ညွတ်နေတဲ့ အချိန် အလင်းကိုအာရုံမပြုတော့ပါဘူး…. ဒီနေရာက အင်မတန် အရေးကြီးတာပါ. မလုပ် တက်ခင်က အလင်းကိုပဲ ထိုင်ကြည့် မိနေတာ ပါ…အဲ့တော့. အလင်း ကိုပဲ ပိုမြင် ပိုထင် ရှားပြီး ကိုယ်ဖူး မယ့် ဘုရားကို မမြင်ရ တာပါ……နောက်မှ သတိထား မိတာက… ဟာ…. အေး.. ဆရာတော် ဘုရားက… စိတ်ကို ပို့ခိုင်း ထားတာလေ..စိတ်နဲ့ ဖူး ခိုင်းတာ လေ..အာ.. အေး.. ငါ…ကွာ.. အတော် တုံးတာပဲ..စိတ်နဲ့ကြည့်မှ အကုန်မြင်တာလေ..စိတ်က မြင် တယ်လို့ပဲ ခံစားမိတာလေ..။
မျက်စိက မြင်တာမှမဟုတ်တာ..ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ် မိမိအိမ်က ဘုရားတောင် အာရုံပြုမှ မြင်တာ လေ..သတိမမူရင် ဂူတောင် မမြင်ဖူးလေ…ဟာ… အေး… ငါ…. အလင်းကို အာရုံ ပြုနေမှ အလင်း ကို မြင်နေတာ ဘာဆန်းတုန်းဟ…ဆရာတော် ဘုရားကြီး ပြောတဲ့ ဟောတဲ့ တရားက ရှင်းနေတာ ကြီးကို ဟာ…ငါကွာ… အတော်… ဉာဏ်မ ပေါက်တာ ပဲ ဆိုပြီး..အဲ့ဒလို သိသွား တဲ့ နေ့ထဲ ကနေစ လို့….စာရေးသူ စိတ်နဲ့ အရာ အားလုံး ကို ဖူးလို့ ရခဲ့တာပါ..ဒီတော့မိမိ ထူထောင်လာခဲ့တဲ့ သမာဓိ အရှိန် တွေက မြင့်သထက် မြင့်နေတော့…စိတ်ကလေး က ကြည်လင် တောက်ပ နေတော့..ဘယ် ဟာ အာရုံ ပြုပြု ထင်ထင် ရှားရှား ဖြစ်နေရ တာပေါ့…ဘယ်လောင်တောင် ထင်ရှား သလဲ ဆိုရင် လေ..ဆိုကြပါစို့ ..ဖျတ်ကနဲ အတွေးလေးတချက်ပေါ်လိုက်တာနဲ့ အဲ့အချိန် တုန်းက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေ ကို အရောင် အဆင်း စကား အသံ တွေ က အစ ကြည် ကြည် လင်လင်ကို မြင် ရ ကြား ရ တာ..အဲ့လို ခံစားမှု တွေက…အဲ့အချိန် တုန်းက ရိပ်သာ မှာဆို တော့လေ…မိမိ ဘာကြောင့် အဲ့ဒလို တွေ ဖြစ်တာလဲ မသိခဲ့ပါဘူး..အရမ်းလည်း ထူးဆန်းခဲ့တယ်..ငါ ဘာကြောင့် အဲ့ဒလို ဖြစ်ရတာလဲ ပေါ့…နောက်ပိုင်းကျမှ…အော်… စိတ်စွမ်းအင်တန်ခိုး တွေပါလားဆိုတာ.. သိလာရတယ်..။
စိတ်ဆိုတာ ကိလေသာတွေ ရဲ့ ဖုံးအုပ်ခြင်းကို ခံနေ ရတော့ ဘယ်မှာ လာပြီး.. ကြည်လင် ပါတော့ မလဲ…အော်… အေး… ငါ.. သိသွားပြီ…ငါသိ သွားပြီ…ဆိုပြီး… ကြာလေ သိလေ… ကြာလေ..ပျော် လေ.. ကို ဖြစ်လာ ခဲ့ရတာပါ..(ဒီအထိ ကတော့ သမထ ပိုင်းအ သိကို ဆိုလို တာပါ)ဒီတော့ ပထမ ပိုင်းမှာမေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးအတွက် အ​ဖြေရသွားပြီပေါ့နော်..ညီမလေးက ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ် ဖူးလို့ ရနေ လား ဆိုတာ..စိတ်ကလေးကို ကိလေသာ တွေ အဝင် မခံရ လေအောင် သတိ နဲ့ အမြဲ စောင့်ရှောက်နေတာမို့..စိတ်ကလေးက အမြဲ အချိန်တိုင်း လိုလို ကြည်နေတာမို့.အမြဲလိုလို ကိုယ် လိုချင် သလို အာရုံပြု လို့ရနေပါ တယ်လိုစ့်… သတိ လစ်တဲ့ အချိန်တိုင်း ကိလေသာဝင်ပါ တယ်.. ဤသည်ကား.. အ​ဖြေပေး သည်.. ခုချိန်မှာတော့ စိတ်ကလေးကို သတိနဲ့ စောင့် ကြည့် လာတာ ရိပ်သာ ထွက်ပြီး ကတည်းက ဆိုတော့.ကျင့်လာတာ တနှစ် ပြည့်ပြီ မို့…..အဲ့ ဒလို မေးစကား လေးတွေကို စာရေးသူ ဒလိုလေးတွေ ပြန်ပြန် ဖြေတက်ပါတယ်…လိုစ့် အော်.. ရသ ပေါ့ရှင့်… ရတာမှ ရရရရ နဲ့တောင် နေသပေါ့ရှင့်.. ကိုယ့်စိတ်ကလေး ကိုယ်ပိုင်ချင်လို့ တရားအား ထုတ်တာ ဆိုတော့.. ခုတော့ မိမိစိတ် ကလေးကို မိမိ ကြိုက်တဲ့ နေရာမှာ ထားလို့ ရသွား တော့ ရ တာ ပေါ့ရှင့် ..ဒါမို့ မိမိစိတ်ကလေး သမထ အာရုံမှာ ခိုင်နေတော့ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်လိုချင်တာ အကုန်လုပ်လို့ ရနေတာပေါ့ရှင့်..။
အဲ့လို ပြန်ပြန် ဖြေတက် ပါတယ်.. အရာအားလုံး က အလေ့ အကျင့်ပါ..မကျင့်ရင်တော့ ဘာမှ မရပါ..ကျင့်မှစွဲစွဲ မှထုံထုံမှ သတ္တိကိန်းသတ္တိကိန်းတော့မှ အကျိုးပေးတါပါ ဆက်ကြပါစို့. ဒီလိုတွေ မပြုခင် မိမိဖူးမည့် ဘုရားစေတီရှိ အစောင့်အရှောက်များ ကိုတိုင်တည် မေတ္တာ ပို့လွှတ် ထား ပါတယ်…. #မမြင်ရ သောရုပ်နုလောကသားများကိုမေတ္တာ တအားပို့ပေးပြီး တောင်းပန် တဲ့ ခွင့်ပန် သည့် စကား များကို အချိန် များများ ပြုလုပ်ဖြ စ်ခြင်းပါပဲ…. #အဘယ်ကြောင့် ထိုအရာ များကိုပြု ဖြစ်သ နည်း ဆိုသော်… စာရေးသူ ဘုရား မဖူးရမှာ ကြောက်လို့ပါ…ပြီးတော့ အရမ်း ကြောက် လို့ပါ…#ကြောက်တက်တာ တခုကောင်း သလိုတောင် ပြောရမလို ဖြစ်နေပါသည်…. #ကြောက်သည့်အတွက် မေတ္တာကိုများ များပို့ဖြစ်သည်…. #မမြင်ရပေမယ့် သူတို့တွေကို စိတ် နဲ့စကားပြောဖြစ်သည်…. #မိမိလိုချင်ဖြစ်ချင်တာများကိုစိတ်နှင့်ညွတ်၍ စကားပြော သည်… ဤ သို့ပြော ဆိုပြီးမှ သာလျှင် ဘုရား ဖူးခန်းကို စတင် ပါသည်….. စာရေးသူ ဘုရား ဖူးရာ တွင် #ဆရာတော် ကြည့်ခိုင်းသည် များကို သာရွေး၍ကြည့် ပါသည်…. ထို့ကြောင့် ဘုရားတဆူ ခဏ လေးပဲ ကြာပါသည်.. .တထိုင်အတွင်း တခါတလေ ဘုရား ၄ဆူလောက် ဖူးပါသည်။
ထို့ ကြောင့် တခါ တလေ သူများ တွေ မြင် သည့် အရာ များ စာရေး သူ မမြင် ခဲ့ ပါ… ဒီလို တောင်းပန်စကားများတွင်တွင်ပြော တွင်တွင် မေတ္တာပို့နည်း များကိုတော့ No(1) မှာ ရေးခဲ့တုန်း ကလိုမျိုးပါပဲ…. ပြောဆိုပုံ များတူတူပါပဲ…ဒလို နဲ့ ဗိုလ်တထောင် စေတီဖူးအပြီး ကျောက်တန်း ကို သွားဖူးပါသည်။.. ဆရာတော် ကမှာသည်က…လူကိုယ်တိုင် သွားရောက် ဖူးရသလို မျိုးရော ဖူးခဲ့ပါတဲ့… စာရေးသူ ကတော့ ၂မျိုးလုံး ဖူးပါတယ်… ပထမဆုံး လူကိုယ်တိုင် ရောက်သွားတဲ့ နည်းနဲ့ ဖူး ပါတယ်…. ဖူးနည်း ကတော့… #တရား ထိုင်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ရှိနေပါတယ်… #အားလုံးကိုလည်းသိနေပါတယ်. ဘုရားဆီကို စိတ်ညွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေး အတွင်းမှာတော့ ထိုင်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကအရာတွေကို သတိ မထားမိ တော့ပါဘူး…. #မိမိရုပ်ပုံလွှာ တခု ဘုရား ရင်ပြင်ဆီကို ရောက်သွားပြီး ရင်ပြင်ကို လက်ယာရစ် လှည့်ပတ်ဖူးပါတယ်….. ဆင်းတု တဆူချင်းအနီးကပ်ဖူးပါတယ်…။
#ငါးစာကျွေးနေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပါတယ်…. ဆရာတော် ဘုရားကြီးက ဘယ်လို ဆက်စပ် မှုရှိလည်းကြည့်ခဲ့ပါဆိုလို့…. အဲ့ ဘုရားမှာ အကြာဆုံး ဖူးခဲ့ပါတယ်…. လိုက် ရှာတာ လည်း ဘာမှ မတွေ့ ရဘူး…. ဒါနဲ့….ငါ #အပေါ်က နေစီးပြီး ကြည့်ဦး မှလို့ဆို ပြီးစိတ် ကို ညွတ် လိုက် ရော…. #အားပါးပါး….. . ရေလည် ဘုရားကြီး က ရေထဲ မှာ မဟုတ်ပဲ…. နဂါး ကြီး တ ကောင်က စေတီ ကြီးကို ရစ်ပတ် ခွေပြီး ပိုက်ထား တဲ့ သဘောမျိုး ကြီး မြင်ရပါ လေရော…… အိုး…. မိုးးးးးး …. ဗုဒ္ဓေါ… ဘာကောင် ကြီးလဲဟ… ဆိုပြီး #သေသေ ချာချာ စိုက်ကြည့် မိခဲ့ပါသည်….. မျက်လုံးတွေလည်းပါတယ်…. အရေခွံပုံစံမျိုး တွေလည်းပါတယ်… အရောင်က #အစိမ်းရောင်နဲ့မြေကြီးရောင်ရောထားတဲ့အရောင်မျိုး…. အပေါ်ကနေ ကြည့်လိုက်တော့မှ.. မြင် ရတဲ့ အနေ အထားမို့ စေတီ က ငယ်သ လိုမျိုး ဖြစ်နေ ပြီး ပိုက်ထား တဲ့ နဂါး ကြီးက အ ကြီးကြီး လိုမျိုး ခံစား ရပါတယ်….. ပြီးတော့…. လှုပ်နေ ပါတယ် အကောင် ကြီးက….ဒါနဲ့…. ဘယ်လို…. ဆက်စပ် မှုလည်း…. ဆိုတာကိုတော့ ရှာမတွေ့ခဲ့ပဲ…. #ယခုလိုပုံစံမျိုးကိုသာဖူးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်.. . . ဒီစေတီတဆူတည်း အကြာကြီးဖြစ်နေပြီ ဖူးနေရတာ ဆိုပြီး… ပြန်တော့မယ်လေ ဆိုပြီး… စေတီရှိ အစောင့်နတ် တွေနဲ့ ဆိုင်ရာ ပိုင်ရာတွေကို အမျှပေး ပါတော့သည်။ ဤတွင်…. အံ့သြရ ပြန်ပါပြီ….။
ထူးထူး ခြားခြား အမျှလည်း ပေးပြီးရော #ခေါင်းပေါင်းနဲ့ အသက်ကြီးကြီး လူကြီးရယ် ခေါင်းမှာ ချွန်ချွန်လေးနဲ့ ကိုယ်လုံး အရောင်က လင်းထိန်နေ တဲ့သူတ ယောက်ရယ်က လက်အုပ် လေးတွေ ချီပြီး သာဓု ခေါ်ပြီး ပြုံးပြီး ခေါင်းလေး တွေကို ညိမ့်နေကြ ပါတယ်…. ဟာ… ငါ… ဘာတွေ…. မြင်နေ တာပါ လိမ့်…..ဆိုပြီး…. #နောက်တခေါက် အမျှ ထက်ပေးတယ်…. အဲ့လိုပဲ… သူတို့တွေ က #ခေါင်းလေးတွေ ညိမ့်ပြီးပြုံ ပြတယ် စာရေးသူကို… ဟာ… ဘာတွေလဲမသိဘူး…. ဆိုပြီး…. ရင်ပြင် ကို နောက် တကြိမ် ထက်ပြီး လှည့် ပတ်ပြီး အမျှတွေ ဝေပေးခဲ့ ပါတယ်……. ဒီလို အမျှ ဝေခြင်း မေတ္တာ ပို့ခြင်း တွေ ကိုတော့ စာရေးသူ က အချိန် အများကြီး လုပ်လေ့ လုပ်ထ ရှိ သလို သေသေ ချာချာ အပြင်မှာ လူတွေနဲ့ စကားပြောသလို မျိုးကို စိတ်ထဲကနေ ပြောပေးတါပါ….. ဒီအကြောင်းတွေ ကိုတော့ စာရေးသူ အသေးစိတ်မရေး ပေးရခြင်းသည်… ပကတိလူသာမာန် မျက်စိဖြင့် မမြင်ရတဲ့ အကြောင်း အရာတွေ ဖြစ်နေ တာကြောင့်…. အသေးစိတ် မရေး ဖြစ်ခဲ့ရ တာပါ…. ဒီ အကြောင်း အရာလေး ဟာဖြင့် စာရေးသူ ၏ ဘုရား ဖူးခန်း များထဲမှ တခုသာ ဖြစ် ပေတေါ့သည် ။
မေး ထား ကြသော မေးခွန်း…#ကိုယ်ခ န္ဓာ တ စ် ခု နဲ့ဘု ရား ဖူး န ည်းစိ တ် ညွှ တ် န ည်း လေး ရှ င်း ပြ ပါ ဆို သော မေးခွန်း လေးအတွက် ယခု လို ဥပမာ လေး တခု ထုတ်နှု တ် ၍ ဖြေပေး လိုက်ရ ပါသည်။ No(3) တွင် ပြန်လည် စုံတွေ့ကြပါ ဦးစို့ ချစ်ဆွေတို့ရေ….. ဒီစာလေး ရေးနေ တဲ့ အချိန်မှာပဲ….တိတ်ဆိတ် နေသော ပတ်ဝန်း ကျင်မှ တရားစာ ရွတ်ဆို ပူဇော် နေသံ များကို ကြားနေ ရသည်မို့…. အော်… အဆိုးထဲက အကောင်း တခုပါလား လို့…. စိတ်ထဲ ကျေ နပ်နေ မိပါ တော့တယ်….. မနက်စောစော တူမလေး၏ ဘုရားရှိခိုး သံရယ်…ဘေးအိမ်မှ ခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကြီး ၏ မနက် နေ့လည် ည ရွတ်ဖတ် ပူဇော် နေသံ များဟာ ဖြင့်… အရင်က အသံမဆဲ ဆို သော ပဌာန်း ပူဇော် ခြင်း များ ကို ရဟန်း များ ကသာ ပြုကြပြီး….ယခု တော့ဖြင့် လူတိုင်း ၏ အိမ်မှ အသံမဆဲ ရွတ်ဖတ် နေကြ ခြင်းအား….လွန်စွာ ပီတိ ဖြစ်ရပါ၏… သတ္တဝါ အားလုံး ကပ်ဘေးအပေါင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ .
Nippon San(Facebook မှ ကူးယူ ဖော်ပြ ပါသည်။)
#ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကမ္မဌာန်းကို ဘာကြောင့် ပထမဆုံး နေ့မှာပွားများ ခိုင်းရပါ သန ည်း❓